पोजेटिभ भएको दुई सातामै नेगेटिभ! - Deshko News Deshko News पोजेटिभ भएको दुई सातामै नेगेटिभ! - Deshko News
पोजेटिभ भएको दुई सातामै नेगेटिभ!
कोरोना भाइरस संक्रमण भइहाल्यो भने कति दिनसम्म अस्पतालको आइसोलेसनमा बसेर उपचार गर्नु पर्ला ? यो कुराले चिन्तित हुनुहुन्छ भने अब ढुक्क हुनुहोस्। दीर्घ रोग नलागेका कोरोना पोजेटिभ व्यक्ति दुई सातामै डिस्चार्ज हुन थालेका छन्।
मुलुकका ७२ जिल्लाका कोराना संक्रमितहरू फेला परेका छन्। हालसम्म सबै प्रदेशमा गरी कुल ४ हजार ६ सय २२ जना संक्रमित रहेका छन्। अन्नपुर्ण पाेष्टबाट